ओहो, उत्तेजनाको कडी! :: स्वास्थ्यखबर :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
ओहो, उत्तेजनाको कडी!
स्वास्थ्यखबर शनिबार, माघ १३, २०६९, १७:१२:००
यौनलाई अनुभूतिको हिस्सा त्यसै भनिएको होइन। कारणः यो विषय मान्छेको संवेग र संवेदनासँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले पनि यौन उत्तेजना सबैभन्दा पहिला मान्छेको मस्तिष्कले अनुभव गर्छ। यस्तो अनुभवपछि सवै नशामा रगत छिटोछिटो बढ्छ। यही कारणले उत्तेजित अवस्थामा अनुहार पनि रातो देखिन्छ। महिलामा नाक, कान, आँखा, स्तन र योनीको भित्ता फुल्न थाल्छ। मुटुको धड्कन बढ्छ। योनिद्वारको बारथोलिन ग्रन्थीबाट तरल पदार्थ निस्कन शुरु गर्छ।
चिकित्सकका अनुसार, लिंग योनीको भित्री भागमा नपुग्दासम्म महिलामलाई चरम आनन्द महसुस हुँदैन। यौन उत्तेजनाको समयमा महिलाको योनीको भित्री भाग र मलद्वार आसपासको मांशपेशी फुल्ने र सुक्ने गर्न थाल्छ।
सम्भोगमा हरेक महिलालाई एकै प्रकारले चरम आनन्द मिल्छ भन्ने हुँदैन। हरेक महिलाको अंगले फरकफरक प्रकारको अनुभव लिन सक्छ। केही महिलामा सम्भोगको वेला एकपटक गर्भाशयको ढोका खुलेको र बन्द भएको अनुभव हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा महिलाको मुखवाट आवाज पनि आउन सक्छ। केही महिलामा सम्भोगको समयमा योनी, मलद्वार र नाइटोदेखि खुट्टासम्म तरंग आएको अनुभव हुन्छ। त्यसले पनि महिलामा चरम आनन्द प्राप्त हुन्छ।
कतिपय महिलालाई सम्भोगका वेला योनीभित्र बेलुन फुटेको जस्तो अनुभव हुन्छ। यो योनीभित्र तीव्र हलचलको संकेत हो। यसले महिलालाई चरम आनन्द मिल्छ। चिकित्सक हरिनारायण गुप्ताका अनुसार, पुरुषलाई वीर्यपतन र महिलालाई घर्षणको समयमा चरम आनन्द प्राप्त हुन्छ। खुला मन र शान्त मुद्रामा सम्भोग गरे जो कोहीलाई पनि चरम आनन्द प्राप्त हुनसक्छ। लिंगको मोटाई वा लम्बाईले यौन आनन्दमा प्रभाव पार्दैन। यौन कार्यमा महिला र पुरुषको निर्लिप्तताले नै संभोगमा आउने आनन्दको मानक तय गर्छ।
धेरै मान्छेले सम्भोगको समय सीमाबारे पनि चिन्ता व्यक्त गरेको सुनिन्छ। तर समय र सम्भोगको आनन्दको खास तादात्म्य हुँदैन। छोटो समयमा वीर्य स्खलन हुनुलाई आनन्द प्राप्त नभएको भन्न मिल्दैन। सम्भोगकालागि २ देखि ५ मिनेटको समय नै काफी हुन्छ। समय लम्ब्याउनकै लागि केही मानिसले मदिरा सेवन गरेर यौन सम्पर्क गरे पनि स्वास्थ्य र यौनजीवनका हिसावले यो काम राम्रो मानिदैन।
- स्वास्थ्य खबरपत्रिका, २०६९ माघ अंकमा प्रकाशित